အသစ် အသစ်တွေ လာပြီ
လူမျိုးပေါင်းစုံက နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာ ဒေါ်စုမွေးနေ့ပွဲကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကျင်းပကြတယ်။ မမြင်ဖူးသော်လည်း စကားမ ပြောဖူးသော်လည်း မသိကျွမ်းသော်လည်း မွေးနေ့ပွဲကို လေးလေးနက်နက် ကျင်းပကြတယ်။ ဘာကြောင့်ကျင်းပ တာလဲ။ အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ အင်အားကြီးမားတဲ့ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကို သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲတင်းတင်း ရင်ဆိုင်၍ ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူကို ဒေါသနဲ့မတုန့်ပြန်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သတ္တိ၊ ရန်သူ့လက်တွင်းမှာ ဇွဲတင်းပြီး ရည်မှန်းချ က်တွေအတွက် စိန်ခေါ်ရဲတဲ့သတ္တိ၊ ကိုယ်ကျိုးကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ အများအတွက် စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့သတ္တိတွေဟာ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတင်မက ကမ္ဘာ့လူထုအလယ်မှာလည်း လေးစားစရာကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားထိုက်သူ ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် လေးစားခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းဟာ မင်္ဂလာတပါးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလူဦးရေအနေနဲ့မြောက် များစွာ သန်းပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း အခုလို စံပြအရာမှာ ထားပြီး လေးစားဂုဏ်ပြုထိုက်သူဟာ အတော်ကိုပဲ ရှားပါတယ်။ အဆိုးတွေကြားက ကျနော်တို့မြန်မာတွေ ဂုဏ်ယူရမည့်ကိစ္စပါ။
ပြည်တွင်းမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေ နေရာအတော်များများမှာ လုပ်ကြပါတယ်။ အန္တရာယ် ပေးနေတဲ့ ဘီလူးသူရဲတွေ အနီးမှာ လုပ်ရတဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေမို့ အခက်အခဲများစွာရှိနေကြောင်းကို အားလုံးအသိ ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိလျက်နဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်တာမို့ ပြည်တွင်းမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ညီတော်နောင်တော် တို့ကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်။
ကျနော်တို့ လောစ်အိန်ဂျလိစ်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးတွေ ဟိုမှာ သည်မှာ လုပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ကိုယ့်မူကိုယ့်ဟန်လေးနဲ့ နည်းစပ်ရာမှာ စုပေါင်းပြီး လုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် အမေရိကမှာရှိတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းမှာ လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးဆို မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအပိတ်ခံရပါ တယ်။ သူ့ရဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ၀ါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးက ပြန်ပို့လာတယ်။ နိုင်ငံကူးလက် မှတ်ပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတော့ ပါမလာဘူး။ ဘာကြောင့်များ မပေးတာလဲလို့ သိပ်သိချင်တာနဲ့ စုံစမ်းဖို့ မြန်မာသံရုံးနဲ့နီးစပ်သူကို လိုက်ရှာတာ ဒါလည်းမလွယ်ကူဘူး။
နောက်ဆုံးမှာ ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်းတဦးက ဒီကိစ္စကို အကပ်တွေ အရပ်တွေနဲ့ စုံစမ်းတယ်။ အဖြေကို သိရ ပါပြီ။ အဲဒါက သူ့အိမ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပွဲကို နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေစုပြီး လုပ်မိလို့ မြန်မာပြည် ၀င်ခွင့် ဗီဇာထုတ်မပေးတာတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းထဲမှာ ကျနော့်မိတ်ဆွေ ၀င်သွားပါတော့တယ်။ ဒေါ်စုမွေးနေ့ပွဲကျင်းပတာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကွ။ ဘယ်ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့မှ မပတ်သက်တာဘဲဗျာလို့ စောဒကတက် မိတော့ စုံစမ်းပေးတဲ့မိတ်ဆွေက ဒီလို ပြန်ပြောလာတယ်။ တို့တွေအနေနဲ့က အပြစ်မရှိဘူး မှန်တယ်။ သူတို့တွေ အနေနဲ့က ဒေါ်စုကို ရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားလေတော့ ဒေါ်စုနဲ့ပတ်သက်သမျှဟာ အပြစ်ပဲ သူငယ်ချင်းတဲ့ဗျား။
ကျနော့်မိတ်ဆွေတဦး လက်တွေ့ကြုံခဲ့တဲကိစ္စတခုကို တင်ပြလိုက်တာပါ။ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာပြည် ပြန်ချင်လို့ နိုင်ငံပြောင်း၊ သံရုံးပြောင်းပြီးဗီဇာလျှောက်တာ ရသွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ စိတ်ကြိုက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ဘာပြဿနာမှ မတက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေဆိပ်က အထွက်မှာတော့ “ဆရာ ပြန်တော့မှာလား၊ ဆရာလာတဲ့အခါ မြန်မာပြည်တွင်းကို ပေးမ၀င်ဖို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဆရာ့နာမည်နဲ့ စာရင်းရှိနေတယ်။ အခုဆရာက ပြန်တော့မှာမို့ ကျနော်တို့ ဘာမျှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆရာ။ နောက်တခါဆိုရင်တော့ ဆရာ့ကို လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်က စောင့်ကြည့်နေတာ တကွက်လွတ်သွားလို့ပါ”တဲ့။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ အငိုက်မိသွားတယ် ထင်ပါ တယ်။ ကံကောင်းသွားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့လေ။
နအဖကျဉ်းမြောင်းတာကတော့ ကမ်းကုန်နေပြီ။ ဒေါ်စုမွေးနေ့ပွဲ လုပ်သူတွေကိုလည်း ဖမ်းလို့ဖမ်း၊ ပိတ်လို့ပိတ်နဲ့ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာပဲ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ရေနစ်မသေလို့ ကျန်ခဲ့သူ ဒုက္ခသည်တွေကို လှူဒါန်းပေးတာကို တောင် ပိတ်တယ်ဆိုတော့ အမည်တပ်လို့မရအောင်ကို မတရားနေပြီဗျ။
လောစ့်အိန်ဂျလိစ်မှာ လုပ်တဲ့ပွဲတွေထဲက ဦးဘုန်းရောင်ဦးအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ပွဲနဲ့ ဓမ္မဇောတိကျောင်းမှာ ကျင်းပ တဲ့ပွဲတွေကို ကျနော်ရောက်ပါတယ်။ ဦးဘုန်းရောင်ဦးအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ပွဲက နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်ပါတယ်။ လူ ဦးရေအနေနဲ့ (၅၀)နဲ့ (၁၀၀)ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ တနေ့လုံး ညအထိ လူတွေမစဲ တဖွဲဖွဲနဲ့ပါ။ ဓမ္မဇောတိကျောင်း မှာ ကျင်းပတဲ့ပွဲကလည်း နှစ်စဉ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခါတိုင်းက ကိုခင်မောင်ရွှေ မတော်မျိုးမြင့်တို့ အိမ်မှာ ကျင်းပတာဖြစ်တယ်။ အခုနှစ်မှာ အကျဉ်းပေါ့ဗျာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျင်းပဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူပဲ ကျင်းပပါ စေ ဒေါ်စုကို ဂါရ၀ပြု ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်လို့ အားလုံးကောင်းပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဒေါ်စုဟာ (၆၃)နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရတဲ့အခါ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို ဒီထက်စည်ကားအောင် ကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို စံပြအနေနဲ့အား ပေးတာဟာ ကမ္ဘာမှာ အာဇာနည်တွေကို မွေးထုတ်ပေးတာနဲ့တူပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အ လွန်ရှားပါးတဲ့ နိုင်ငံတကာက ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ မွေးနေ့ပွဲဟာ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ကို ကိုယ်စားပြုတာ ဖြစ်လို့ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။
အတာရေ ဆောင်းပါးက မတက်လို့ ဥဒါန်းသစ်ကတော့ မေ၊ ဇွန် ရောက်တဲ့ထိ သင်္ကြန်ကျနေတုန်းပဲလို့ မာယာ က အစ်ကိုကြီးတယောက်က ကျနော်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တိုင်း လှောင်တယ်။ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်း သရော်တဲ့ စာတွေ ၀င်ရေးသွားတတ်တယ်။ ဒီနေ့ရေးထားတဲ့ အတိုအထွာလေးတွေ ဖတ်ပြီး အသစ်အသစ် ဖတ်စရာတွေ ရောက်လာပြီဆိုတော့ ခဏခဏ နားပူရတဲ့ တင်းဝါးခြစ်သံနဲ့ ပုရစ်သံတော့ တိတ်သွားလောက်ပြီ။
ကိုယ့်အရေး၊ သူ့အရေး၊ ဟိုအရေး၊ သည်အရေးတွေကြားမှာ ဗျာများနေတဲ့ကျနော်ကလည်း ကျနော်ပါပဲ။ သူများ တွေက မအားတဲ့ကြားက စာရေးတယ်။ ကျနော်က မအားတဲ့ကြားက တယ်လီဖုံးတလုံးနဲ့ ပြန်ကြားရေးလုပ်ပြီး လေပေးနေရတယ်။ ဒီတော့ဗျာ ပုံမှန်စာရေးတာလေး ပျက်ကွက်သွားတယ်။ ဆရာသိန်းဖေမြင့် ပြောသလို စာ ရေးဖြစ်အောင် နေ့စဉ်စာရေးနေကြစာပွဲမှာ ရေးချင်သည်ဖြစ်စေ မရေချင်သည်ဖြစ်စေ သွားထိုင်မှပဲဖြစ်တော့ မယ်ထင်တယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။
စာမရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ ကျောင်းစာတွေများနေတာလဲပါတယ်ဗျ။ ကျောင်းကမပြီးသေးတော့ မကြီး မငယ်နဲ့ စာတွေဖတ် ကျောင်းတွေတက်နေရသေးတယ်လေ။ ဒီကြားထဲက မဖြစ်မနေ ခရီးသွားစရာတွေ ပေါ်လာပြန်တော့ ခရီးထွက်ရသေးတယ်။ ခရီးသွားရင်းလဲ စာရေးမယ်လို့ အားခဲထားတာ တကယ်တော့ စိတ် ကူးယဉ်သက်သက်မျှသာပါ။ ဟိုမှာက လူစုံတက်စုံတွေ့တော့ စာရေးဖို့နေ နေသာ လေပေးတာနဲ့ အိပ်ချိန်ကို မ ဖြစ်မနေလုအိပ်ရတယ်။
အခုတော့ နွေရာသီ ရောက်ပြီဖြစ်လို့ အတော်လေး အားလပ်လာပြီ။ ဒါတောင် ကလေးတွေ စာသင်ဖို့တာဝန်က အသစ်တိုးလာတယ်။ လုပ်ပေးရဦးမှာပဲလေ။ မျိုးဆက်သစ်တွေ တိုးတက်ရစ်ဖို့ ကျနော်တို့တွေ လူတိုင်းမှာ တာ ၀န်ကိုယ်စီ ရှိကြတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ အေးဗျာ . . . အားလပ်မှ အလုပ် လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ခရီးရောက် မှာကို မဟုတ်တော့ဘူး။ မအားတဲ့ကြားက လုပ်မှ လုပ်ဖြစ်မှာပါ။
ကျနော့်မိတ်ဆွေ စာရေးဆရာတဦးကတော့ သူ့အလုပ်ကို လက်တော့ကွန်ပြူတာလေး ယူသွားတယ်။ အားတဲ့အ ခါ စာတွေ ဆောင်းပါးတွေ ရေးရအောင်လို့ပြောတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်။ စာတွေလည်း အတော်ရေး ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ သူ့လို လက်တော့ကွန်ပြူတာလေး ဆောင်ထားရအောင်ကလည်း ကိုယ်က သူဌေးမဟုတ် တော့ အခက်သားလားဗျာ။ လက်တော့ပ် မတတ်နိုင်တော့လဲ စာအုပ်ကို အားကိုးလို့ရသားပဲ။ ကိုယ့်နေရာမှာက ကွန်ပြူတာနဲ့ အမြဲစာရေးနေကြဆိုတော့ ဇာတ်ပျက်နေပြီ။ စမ်းတော့ ကြည့်ရမှာပဲ။
စာမရေးဘဲ ဥဒါန်းသစ်ကို ဒီအတိုင်းရပ်တန့်ထားလို့ စီဘောက်စ်ထဲမှာ လာ လာပြီး သရော်နေတဲ့ နွေးအေးတို့ အ ဖွေးလေးတို့ကို အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ အသစ်အသစ်တွေ မကြာမီလာတော့မယ်လို့။ ဒါပေမဲ့ မပေါ်လာသေးလို့ ကြာနေရင်လည်း သည်းခံလက်စနဲ့ ဆက်လက်၍ သည်းခံ၍ စောင့်ပါဦးလို့ ကြိုတင်မှာချင်ပါသေးတယ်။ ကျနော့် ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ . . .
Posted by gandawin at 12:53 AM ,0comments
ကိုဝင်းပေါ်မောင်ဟာ ကျနော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတဦးပါ။ သူက ကိုရီးယားမှာနေတယ်။ ထောင် စုပြူတင်းဂျာ နယ်ကို နှစ်အတော်ကြာကြာ ထုတ်ခဲ့သူပါ။ ကိုရီးယားက မြန်မာတွေကြားမှာ သူ့ ဂျာနယ်လေးက လူဖတ်များပါ တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မအားလို့ ထင်တာပဲ လုံးဝမထုတ်ဖြစ် တော့ဘူး။
ဂျာနယ်လည်းပျောက်၊ လူလည်းပျောက်၊ ဘယ်ဆီများရောက်နေပါလိမ့်လို့ ကိုဝင်းမြင့်ဦး၊ ကိုသန့်ဇင်အောင်တို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မေးဖြစ်တယ်။ သူတို့နဲ့လည်း မတွေ့တာ ကြာပြီတဲ့။ ခြေရာလည်းပျောက် ရေလည်းနောက်ဆိုတော့ နို့ထဲပန်းများ ရောက်နေမလား မသိ။ လူငယ်တွေဆိုတော့ သူတို့တွေ ကျက်စားရာကို မှန်းကြည့်မိတာပါ။ ဘိုင် ကျလို့ နို့ထဲပန်းမပြောနဲ့ မြို့ထဲကလမ်းမှာတောင် လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ဘ၀ဆိုရင် အခက်၊ မ စ နေရဦးမယ်။
ဂျပန်ကထုတ်ထဲ့ ဂျာနယ်မှာတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေတာတွေ့တယ်။ လူက ပျောက်နေတ တ်တယ်။ ဟောဗျာ . . . အခုတော့ ကိုပေါ်ကြီးပေါ်လာပြန်ပါပကော။ ကျနော့်ကို အီးမေးလ်နဲ့ဖိတ်လာတယ်ဗျ။ ဘာ တဲ့ . . . ဟန်းဂုရွာကို အလည်လာပါဦးတဲ့။ အလည်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲသည်မှာ ဖတ်စရာတွေ မှတ်သားစရာ တွေ ရင်နာစရာ ဇာတ်နာစရာတွေ တပုံကြီးပဲ။ အတော်လေး ကြိုးစားထားတာ တွေ့ရတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကိုကြီးပေါ်လက်ရာက စာနယ်ဇင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေက သူ့ကို အဲသ လို တန်ဖိုးထားပါတယ်။ သူ့ကိုယ်တိုင်တော့ ကိုယ့်အနေအထား ကိုယ်သိရဲ့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
စာပေ၀ါသနာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်အလည်သွားပြီးဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် လိပ်စာလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ လိပ်စာက http://burmainfokorea.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားက လူငယ် တွေ သိပ်ကြိုးစားကြတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုအရေးထက် တိုင်းရေးပြည်ရေးတွေ ကို ရှေ့တန်းတင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေပါ။ ငယ်ရွယ်သော်လည်း လေးစားစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ စာ ဖတ်သူကိုယ်တိုင် ဟန်းဂုရွာကို သွားလည်ရင် သူတို့ကြိုးစားထားတာလေးတွေ လက်တွေ့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးကို ကိုယ့်အိမ်မှတ်ပါ ကိုယ့်ရာမှတ်ပါ ဆိုတဲ့ စကားက အစတုန်းကတော့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖွား တွေအတွက် မမှန်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက ရွာကိုလွမ်းတတ်တယ်။ ရွာနဲ့မခွဲချင်ဘူး။ ကိုယ့်ပြေကိုယ့်ရွာမှာ ပဲ မွေးမယ်။ သေမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေ မဟုတ်လား။ အခုတော့လဲ အဲသည်စကားက အခြားလူမျိုးတွေအတွက် တင်မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ပါ မှန်လာပြီ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖွားတွေ မရောက်တဲ့နေ ရာ မရှိတော့ဘူး။ အခုဆိုရင် ကိုရီးယားမှာ မြန်မာတွေ သိပ်များလာပြီ။ တနေ့သောအခါ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးမှာ သူတို့တွေရဲ့ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေက တန်ဖိုးရှိလာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေများလို့ မျက်စိကြီး နားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ။ အတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းလဲကုန်ပြီ။ ကိုယ့် ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တတ်တဲ့အလေ့က သူများငါးချဉ်ကိုပါ ချဉ်တတ်လေမှန်း လက်ကမ်းကြိုဆိုတတ်တဲ့ နားလည်မှု တွေ များစွာရလာပါပြီ။ ထိုမှတဆင့် ပြည်တွင်းမှာ အမြင်ကျဉ်းနေတဲ့ ငတိကြီးငယ်တွေ အမြင်များပြောင်လဲလာ ပြီး တိုင်းပြည်ရှေ့ရေးကို ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ လက်တွဲအတူ လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ကျင့်သားတွေရလာပြီး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရလာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ကျဉ်းတာက အ မြင် ကျယ်တာက ဖင်ခေါင်းဆိုတဲ့ ဆရာမောင်ထင် ပြောသလို အခြေအနေပဲ ငတိတွေမှာရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်ချီတက်ရမှာက ကျနော်တို့အားလုံး တာဝန်ပါ။
ဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်ဗျား။ ဟန်းဂုရွာသို့ မကြာမကြာ အလည်လာမှာပါ . . .
Posted by gandawin at 12:20 AM ,0comments